होम भिजिटका लागि के के तयारी गर्ने ? | नुवागी
होम भिजिटका लागि के के तयारी गर्ने ?
कुनै पनि काम गर्नुपूर्व तयारी जरुरी हुन्छ, योजना बनाउनु जरुरी हुन्छ । विद्यालयले गर्ने होम भिजिटका लागि पनि विशेष तयारी गर्नुपर्ने अनुभवी शिक्षक र प्रिन्सिपलहरू बताउँछन् । विनातयारीको होम भिजिट मात्र औपचारिकता हुने भएकाले तयारी सुरुमै गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसैले प्रअ ढकाल भन्छन्, ‘पहिला स्टाफहरूबीच छलफल गर्ने गर्छौँ । कक्षागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीहरूबाट आएका समस्याहरूबारेमा शिक्षकहरूबीच छलफल गर्छौँ । ती समस्याहरू केलाउँछौँ । त्यसरी केलाएपछि अभिभावकसमक्ष कसरी प्रस्तुत हुने अनि प्रत्येक अभिभावकबाट एउटै सन्देश जाने गरी तयारी गरेपछि होम भिजिट गर्ने काम गर्छौँ ।’ उनी भन्छन् । यतिमात्र नभएर बिमल मेमोरियल विद्यापीठका प्रिन्सिपल कुमार थापामगर पनि योजना बनाएर होम भिजिटमा जाने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हुन त हामी होम भिजिट आवश्यकताअनुसार गर्ने गर्छौँ । जस्तै कि कुनै अभिभावकले आफ्नो सन्तानको विषयमा स्कुलका प्रिन्सिपल, शिक्षक घरमा नआई भएन भन्ने बढी माग भएपछि हामी समय मिलाएर अभिभावकको घरमा जाने गर्दछौँ ।
होम भिजिटको योजना यसरी पनि बनाउन सकिन्छ
० शिक्षक नै अभिभावकको घरमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो, जुन विधिबाट अभिभावकका सरोकारका विषयमा खुलेर कुराकानी गर्न सकिन्छ साथै यसले शिक्षकलाई अभिभावकको अवस्थाबारेमा ज्ञात हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउन भिजिटको महत्वबारेमा सर्वप्रथम विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्ने, आवश्यक भएमा होम भिजिटबारे विशेषज्ञको सहायता लिने । (अनौपचारिक कुराकानी गर्ने सीप सिक्ने
० अभिभावकलाई पनि होम भिजिटको औचित्यबारे बुझाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि विद्यालयमै
बोलाएर सबैलाई जानकारी दिन सकिन्छ । त्यसपछि उनीहरूको अपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न विद्यालय र
शिक्षकहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।
० अभिभावकहरूका अपेक्षाबारेमा अध्ययन र सर्वेक्षण गर्ने ।
० होम भिजिट गर्नका लागि बार्षिक योजना बनाउने ।
० होम भिजिटका लागि शिक्षकहरूलाई मानसिक रूपमा तयार गराउने, शारिरीक रूपमा अघि बढाउन चाहिने स्रोत, सामग्री र तौरतरिकाबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने ।
० कक्षागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीहरूबाट आएका समस्याहरूबारेमा शिक्षकहरूबीच छलफल गर्ने र, समस्याहरू केलाउने, समस्या केलाएपछि अभिभावकसमक्ष कसरी प्रस्तुत हुने अनि प्रत्येक अभिभावकबाट एउटै सन्देश जाने गरी तयारी गर्ने
० अभिभावकहरूको रोजगारीलगायत विषयमा प्रश्नहरू सोध्नुपूर्व कार्यसूची तयार गर्ने ।
० अभिभावकको घर जानुअघि नै यति समयका लागि आउँदै छौँ भन्ने जानकारी दिने ।
० अभिभावकलाई लिखित के दिन सकिन्छ ? साथमा बोक्ने र दिने ।
ललितपुरको एन.जे.एस.एन मन्टेश्वरीकी प्रिन्सिपल मनिता पौडेलले बच्चाले कसरी घरमा शिक्षा लिइरहेका छन्, परिवारबाट पढाइमा सहयोग पाउनुभएको छ कि छैन र उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ भनेर जान्नका लागि वर्षमा एकपटक विद्यार्थीको घरमा जाने गरेको बताउँदै होम भिजिट जाँदा सुरुमा अभिभावकको कुरा बुझ्ने तयारी गर्ने गरेको बताइन् । ‘बच्चाकै घरमा गएर अभिभावकहरूले कस्तो शिक्षा खोज्नुभएको हो, उहाँहरूले बच्चालाई कसरी अगााडि बढाउन सोचिरहनुभएको छ, आफ्नो स्कुलबाट केको अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ । हामी र अभिभावकबीचमा कुरा भएर मात्र बच्चाहरूमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’ प्रधानाध्यापक महेन्द्रगोपाल कर्माचार्यले होम भिजिट भनेर विद्यालयले परार साल एकपटक गरेको बताए । ‘त्यो पनि विहान र साँझ गरेका थियौँ । परार साल, वि.सं. २०७३ मा हामीले कक्षा ८, ९ र १० पढ्ने विद्यार्थीहरूबीच एक सर्भे गरेका थियौँ ।’ उनी भन्छन् । उनले त्यो बेला ‘कति जनाको छुट्टै कोठा छुट्टै रहेछ , पढ्ने ठाउँ, लेखपढका लागि ठाउँ छुट्टाएको छ कि छैन ? ’भनी हेर्न गएको जानकारी दिँदै त्यो क्रममा जम्मा १७ जनाको छुट्टै पढ्ने कोठा रहेको पाएको बताए । ‘त्यतिखेर हामीले नमूनाको रूपमा १५० घर हेरेका थियौँ । अरुको चाहिँ एउटै कोठामा सुत्ने, एउटै कोठामा पढ्ने, एउटैमा खाना पकाउने, खाने लगायतका समस्या रहेछन् । हामीले अझै पनि घर परिवारमा पढ्ने वातावरण बनाउन सकेका रहेनछौँ भन्ने कुरा त्यो नमूना सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।’ त्यही सर्वेक्षणले होम भिजिटलाई अझ व्यवस्थित रूपमा लग्न र त्यसलाई नै अभिभावक शिक्षाको एक पाटोको रूपमा लिन सघाएको उनी बताउँछन् ।
होम भिजिटमा नगरी नुहने कुराहरू
० होम भिजिट गर्दा शिक्षक टोली मिलनसार, भद्र र धैर्यवान बन्नुपर्छ ।
० विद्यार्थीको पढ्ने कोठा भए गएर हेर्नुपर्छ । नभए उसले गृहाकार्य गर्ने वा बसेर पढ्ने ठाउँको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ ।
० विद्यालय, कक्षा, सहपाठीहरूसँगको व्यवहारका अलावा विद्यार्थीको राम्रो पक्ष, सुधार्नु पर्ने पक्षबारेमा बताउनुपर्छ ।
० विद्यार्थीको पढाइ र भविष्यका लागि अभिभावकले खेल्न सकिने भूमिका र तरिका सिकाउनुपर्छ, उदाहरण दिएर अभिभावकलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ ।
० अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकाको सिकाइमा सहभागी भइरहन अनुरोध गर्नु पर्छ ।
० नियमित रूपमा विद्यालयमा आइ बालबालिकाको पढाइलगायत अन्य विषयमा जानकारीहरू गराइ रहन र विद्यालयको उसको गतिविधिबारे थाहा पाउन अनुरोध गर्न पर्छ ।
० कथंकदाचित विद्यालय वा त्यहाँका शिक्षकहरूबारे कुनै गुनासाहरू भए नहिच्किचाइ सम्बन्धित शिक्षक वा विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई भन्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
० होम भिजिटको लागि समय उपलब्ध गराएकोमा अभिभावकप्रति आभार व्यक्त गर्नुपर्छ ।
प्रिन्सिपल रीता आचार्य होम भिजिट गर्दा अभिभावकको व्यक्तिगत कुराहरू के कस्तो छ भनेर सोध्न नहुने बताउँछिन् । अभिभावकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिएर होम भिजिट गर्न उनी सझाउँछिन्, ‘कुनै पनि अभिभावकलाई प्रश्न गर्दा उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई लिएर व्यक्तिगत कुराहरू, आर्थिक कुराहरू सोध्न हँुदैन । हामीले त्यस्तो कुरा याद गर्नुपर्छ ।’ त्यसका अलावा उनी अझ सुझाउँछिन्, ‘स्कुलको शिक्षक आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही खुवाउनुपर्ने हो कि’ कोही अभिभावकलाई दबाब हुनसक्छ । त्यहि भएर हामी अभिभावकको घर जानुअघि नै हामी छोटो समयका लागि मात्र आउँदैछौँ साथै हाम्रो लागि केही व्यवस्था नगरिदिनुस् भनेर जानकारी दिनुपर्छ ।’
हामे भिजिटमा के गर्नु हुन्न ?
० होम भिजिटमा जाने शिक्षक जाशुसी गर्ने मनसायले जानु हुँदैन । अभिभावकसँग रुखो व्यवहार गर्नु कदापि हुँदैन ।
० शिक्षक भद्धा वा असजिलो किसिमका पहिरनमा जाँदा अभिभावकलाई खुलेर आफ्नो कुरा राख्न असहज हुन्छ ।
० शिक्षकले होम भिजिट गरेर ठूलै गुण लगाए जस्तो भाव प्रकट गर्नु हुँदैन ।
० अभिभावकको व्यक्तिगत विवरणहरू नबताएको खण्डमा वा सोधेर पनि भन्न नचाहेको बुझिएमा फेरि सोध्न हुन्न ।
० विद्यार्थीका कमजोरीबारे चर्चा गर्नु हुँदैन । सुधार्नु पर्ने कुराहरूलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्न ।
० भुलेर पनि कुनै विद्यार्थीलाई कुनै अर्को विद्यार्थीसँग तुलना गर्नु हुँदैन ।
० घरको, कोठाको अनि त्यहाँ भएका अन्य वस्तुहरूबारे अनावश्यक टिप्पणी गर्नु हुँदैन ।
० कसैका कुनै कुरा चित्त नबुझे त्यहीँ भनिहाल्नु हुँदैन ।
० अभिभावक भेट्दा, फलानो अभिभावककोमा यस्तो, तपाईंकोमा चाहिँ यस्तो भनेर तुलना गर्ने कुरा गर्नु हुन्न ।
काठमाडौंको अन्सरा प्रि–स्कुलकी प्रिन्सिपल अञ्जु महर्जनले होम भिजिट गर्दा एउटा शिक्षक, एउटा अभिभावक मात्र नभएर मिलनसार व्यवहार हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘उहाँहरूको रोजगारी लगायत विषयमा प्रश्नहरू सोध्नुपूर्व तयारी कार्यसूची लान्छौँ ।’ ताहाचलको सेमरक लिटिल हार्बटकी प्रिन्सिपल पार्वती लामाले कोही अभिभावकलाई होम भिजिट मनपर्ने कोहीलाई मन नपर्ने भएकाले शिक्षक र विद्यालयले त्यो मनोविज्ञान बुझ्नुपर्ने बताइन् । ‘होम भिजिट भनेकै बच्चाहरूलाई एउटा अवधारणा दिनको लागि हो । यो एउटा पाठ्यक्रमभित्रकै विषय भएकाले अभिभावकहरूलाई होम भिजिटको अवधारणा दिनुपर्छ ।’ उनी भन्छिन् ।
वर्णमालाको दोस्रो अभिभावक दिवस सम्पन्न
राजस्वि पाठशालाका विद्यार्थी जात्रा अवलोकनमा